zokyidealy, Auteur à Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany - Page 3 sur 5
Tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny faha 15 taonany ny Fiangonana Apokalypsy Mahitsy amin’izao fotoana izao, ary nanomboka ny fanamarihana izany izy ny sabata 15 Aogositra 2015 lasa teo. Nomarihana tamin’ny fotoam-bavaka miavaka izany izay nontronin’iContinue reading
Avy tetsy amin’ny Fiangonana Apokalipsy Ankeniheny Ambohidroa ny Pasteur Mailhol André Christian Dieu Donné dia nitsidika indray ny fiangonana Iavoambony,17,6 Km miala avy eo amin’ny renivohitr’i Madagasikara, ao anatin’ny paroasy Ambohimanga Rova. Ao anatin’ny fanorenanaContinue reading
Avy nitsidika ny faritra Miarinarivo ny Pasteur Mailhol dia nitsidika indray ny fiangonana Apokalypsy tetsy Ankeniheny Ambohidroa ny sabata 01 Aogositra 2015 lasa teo. Toy ny sabata rehetra atramin’izay rehefa miaraka amin’ny Pasteur Mailhol diaContinue reading
Miarinarivo, 100km miala ny renivohitr’i Madagasikara. Renivohitry ny faritra Itasy izay manana velaran-tany eo amin’ny 6,993 km2 eo ho eo, ary efa ahitana mpino Apokalypsy maro dia maro. Tamin’ny taona 2000 no nisian’ny fiangonana voalohany tamin’ity faritraContinue reading